‘लाइफटाइम वारेन्टी नै किचको विशेषता हो’ – Arthik Awaj
‘लाइफटाइम वारेन्टी नै किचको विशेषता हो’
By आर्थिक आवाज	 २०७६ फाल्गुन १९ गते सोमबार ०८:३७ मा प्रकाशित
कार्यकारी निर्देशक, पार्थ इन्टरनेशनल प्रालि
भारतीय प्रशिद्ध कम्पनी किचका उत्पादनहरु नेपाली बजारमा बिक्री सुरुवात भएको छोटो समयमा नै लोकप्रिय बनेका छन् । किच ब्राण्डका स्टेनलेस स्टिल हार्डवयरहरु नेपाली बजारमा पार्थ इन्टरनेशनल प्रालिले आधिकारिक बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेको छ । डिलरहरुमार्फत नेपालभरको बजारमा किचका प्रडक्टहरु पुगेका छन् । यसैक्रममा किच ब्राण्डमा केन्द्रित रहेर पार्थ इन्टरनेशनल प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निकुञ्ज अग्रवालसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
किचका कुनकुन प्रडक्ट नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् ?
किच ब्राण्डका स्टेनलेस स्टिल हार्डवयरहरु नेपालमा बिक्री भइरहेका छन् । किचका ३१६ ग्रेडका हार्डवयर फिटिङ, रेलिङ फिटिङ तथा ग्लास रेलिङहरु नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेका छन् । स्टेनलेस स्टिल हार्डवयर उत्पादन गर्ने किच कम्पनी भारतको ठूलो कम्पनी मध्यमा पर्छ । किचका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता पार्थ इन्टरनेशनल प्रालि हो । लाइफटाइम वारेन्टी हुने यो प्रडक्ट नेपाल, भारतसहित संसारका करिब ३ दर्जन देशमा बिक्री हुँदै आइरहेकोछ ।
नेपाली बजारमा किचको बिक्री कस्तो छ ?
किच गुणस्तरीय उत्पादन हो । नेपाली बजारमा किचले ग्राहकको विश्वास जित्न सफल छ । व्यावसायिक भवन, होटल, हस्पिटल, ठूला महल, विमानस्थल, हाइड्रोपावर, उद्योग लगायतका क्षेत्रका लागि किचका उत्पादन बढी उपयोगी छन् । यी क्षेत्रमा प्रयोग पनि भइरहेको छ । ठूला ठूला प्रोजेक्टहरुमा किचकै ब्राण्डहरु प्रयोगमा आउने क्रम बढिरहेको छ ।
किचका प्रमुख विशेषताहरु केके छन् ?
सन् २०१६ मा भारतको नेशनल अवार्ड जित्न सफल किचले इन्डियन डिजाइन मार्क अवार्ड पनि प्राप्त गरेको छ । किचले अन्य दर्जनौं अवार्डहरु जित्न सफल छ । पानी तथा धुलोले खिया नलाग्नु पनि किचको विशेषता हो । ब्राण्डेड सामानलाई बजारमा सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्न सक्नु पनि यसको विशेषता हो । एक पटक प्रयोग गरेपछि जीवनभरका लागि ठुक्क हुन्छ ।
नेपालमा कहिलेबाट किचको बिक्री सुरु भएको हो ?
किचका उत्पादन नेपालमा बिक्री सुरु भएको २ वर्षमात्रै भएको छ । काठमाडौं र विराटनगरबाट बिक्री सुरुवात गरेको प्रालिले देशभर बजार विस्तार गर्ने क्रम जारी छ । पोखरासँगै इनरुवा, काठमाडौंकै पुतलीसडकमा शोरुम विस्तार गरिसकेका छौं । नेपालगञ्ज, भैरहवा, बुटवल लगायतका क्षेत्रमा पनि बजार विस्तार गर्ने तयारी छ ।
ग्राहक सन्तुष्ट छन् ?
हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । एकपटक किचका सामान प्रयोग गरिसकेका ग्राहकले अरुलाई पनि यही सामान प्रयोग गर्न सिफारिस गर्ने गरेको हामी पाउँछौं । नेपालमा बिक्री सुरुवात भएको छोटो समयमा नै हजारौं ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्न सफल भएका छौं । झ्याल, ढोका, बाथरुम भ¥याङमा प्रयोग हुने स्टिल तथा फर्निचरका लागि किचको माग बढिरहेको छ । साना तथा ठूला विकासका प्रोजेक्टहरुमा पनि किच प्रयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।
पोखरामा किचको माग कस्तो छ ?
किच ब्राण्डका स्टेनलेस स्टिल हार्डवयरहरुका लािग पोखरामा क्षेत्रको आधिकारिक बिक्रेता राजा ग्लास हाउस चिप्लेढुंगा हो । किच ब्राण्डका हार्डवयर स्टिलहरु पोखरा भित्रिएको छोटो समयमा नै ग्राहकमाझ लोकप्रिय भएको पाएका छौं । प्रयोगकर्ताबाट राम्रो प्रतिक्रिया पनि आइरहेको छ । पोखरासँगै देशभरको बजारमा यसको बिक्री दर बढिरहेको छ ।
स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरी सुचारु भए पर्यटकीय गतिविधी
प्याज प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ भन्दा बढीमा बेच्न नपाइने
लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नेपाली बजारमा ल्यायो हुन्डाई ग्राण्ड आई टेन नियोस (मूल्य र बिशेषता सहित)
गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय सँग सहकार्य गर्न तयार छौं : अटोमोवाईल व्यवसायी
सिभिल बैंकले नेप्सेलाई भन्यो, ‘हिमालयन बैंकसँग मर्जरको प्रचार गरेका होइनौं’
कौसी खेती तथा कम्पोष्ट मल बनाउन प्रोत्साहन गर्दै तालिम
नेपाली बजारमा लन्च भयो हुन्डाईको नयाँ जेनेरेसन क्रेटा, (मूल्य, बिशेषता र भिडियो सहित)